Rafael Alberti, makore 19 asina mudetembi wegungwa. Mavhesi mundangariro dzake | Zvazvino Zvinyorwa
Zadziswa nhasi Makore 19 mushure mekufa yemumwe wevanyori vepamusoro veSpanish Raphael Alberto. Musi waGumiguru 28, 1999, mudetembi uyu uyezve munyori wemitambo akasiya mamorero, nhengo yeGeneration ye27. Aionekwa semumwe wevanyori vanomiririra zvakazozivikanwa seSilver Age yeSpanish zvinyorwa mune yekutanga yechitatu yezana ramakore rechiXNUMX. Nhasi Ndinoburitsa nhetembo idzi ina kurangarira.
2 5 nhetembo
2.1 Zvandakusiira iwe
2.2 Kuna Garcilaso de la Vega
2.3 Iine iyo
2.4 Ngirozi yakanaka
Alberti akaberekerwa muEl Puerto de Santa María musi waDecember 16, 1902 ndokufira muguta rimwe chetero. At 15 akaenda ku Madrid ndokugara imomo kubvira ipapo. Rini baba vake vakafa muna 1920, chokwadi chakamuratidza kunyanya, akatanga kunyora nhetembo. Uye paakange achizvitsvaga semunyori akasangana neakazara chizvarwa yevechidiki vakapenya saiye aizoita mumwe weanomiririra uye ane simba kwezana rese ramakumi maviri reSpanish. Yaiva iyo ye27 uye pakati pavo paiva Federico García Lorca, Pedro Salinas kana Vicente Aleixandre.
Kana iyo Civil War yakazvimisikidza pachayo kuburikidza neAlliance yeAntifascist Intellectuals. Mushure mekukonana, akaenda kuutapwa uye aigara munzvimbo dzakasiyana siyana dzepasi, kubva kuParis kusvika kuBuenos Aires.
Nezve basa rake, Akanga ari iye munyori werondedzero refu yezvikamu zve nhetembo, kusanganisira shamwari yake Mufambisi wechikepe panyika, ndiani akakunda iyo National Nhetembo Mubairo, Chipoko chinotambudza Europe, Kunyemwerera China, Pane ngirozi o Nziyo dzeAltair.
Ndakasiya masango angu kwauri, kurasikirwa kwangu
gwai, imbwa dzangu dzisina hope,
makore angu eguta akadzingwa
kusvikira ingangoita nguva yechando yehupenyu.
Ndasiya kuzunza, ini ndasiya kuzunza,
murazvo wemoto usina kudzimwa,
Ndakasiya mumvuri wangu ndapererwa
kubuda ropa maziso ekuparadzana.
Ndakasiya njiva dzakasuwa parwizi
mabhiza pazuva rejecha,
Ndakamira kunhuwa gungwa, ndakamira kukuona.
Ndakasiya zvese zvaive zvangu iwe.
Ndipe iwe, Roma, mukutsinhana neshungu dzangu,
sekusiya kwandakaita kuti ndive newe.
Kuna Garcilaso de la Vega
… Pamberi penguva uye padyo neruva rakatemwa.
Iwe ungadai wakaona iyo ivy ichichema apo inonzwisa tsitsi mvura yakapedza husiku hwese ichitarisa pamusoro peiyo yatove isina ngowani isina mweya,
kune ngowani inofa pane rozi yakazvarwa mumhute iyo inorara magirazi enhare
panguva iyoyo apo tuberose yakanyanyisa inorangarira hupenyu hwavo pavanoona violets vakafa vasiya mabhokisi avo
uye mbira dzinonyura nekuzvitsika-tsika.
Ichokwadi kuti makomba akagadzira hope uye zvipoko.
Ini handizive icho icho chisingafadzi nhumbi dzokurwa dzinotarisa pazvirugu.
Kune mwenje sei iyo inokurumidza kurayira marwadzo eminondo
kana iwe uchifunga kuti ruva rakachengetedzwa nemashizha ayo anogara kwenguva refu?
Kurarama zvishoma uye kuchema ndiko kuguma kwechando chinosuwa nzira yacho.
Ku maodzanyemba shiri inotonhorera inogara ichichekwa kuita kunge maruva.
Ndichaenda nechikepe, mambakwedza, ndichibva kuPort,
akananga Palos de Moguer,
paigwa risina zvikwasviso.
Husiku, ndega, kugungwa!
uye nemhepo uye newe!
Nendebvu dzako nhema iwe,
Uya wandaida akauya
Kwete iye anotsvaira matenga asina dziviriro.
nyeredzi dzisina dzimba,
mwedzi isina nyika,
Chando cheaya anodonha neruoko rumwe,
Kwete iye uyo kune vhudzi rake
Pasina kukwenya mhepo,
pasina kukuvadza mashizha kana kutenderera makristasi.
Uyo kune vhudzi rake
Nekuti pasina kundikuvadza,
chera gungwa remwenje unotapira mubhokisi rangu
uye ita kuti mweya wangu ufambe.
Mumaroto mafungu emvura
pano? Kuchema kuti ndione gungwa,
mumwe mufambisi wechikepe panyika
simudza kuchema uku kumhepo:
Ah bhurugwa rangu rechikepe;
mhepo yaigara ichiifemera
uchiona iyo breakwater!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Rafael Alberti, makore 19 asina mudetembi wegungwa. Mavhesi mundangariro dzake
Eduardo Mendoza: Biography uye akanakisa mabhuku
Agatha Christie: hupenyu hunonakidza senge zvinyorwa zvake.